Ra’iisul Wasaare Rooble oo soo dhisaya Xukuumad Tayo leh (Akhriso 8 Qodob oo saldhig u ah) | Somalia News
Ra’iisul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo maanta Codka Kalsoonida ay siiyeen Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegay inuu soo dhisi doono Xukuumad tayo leh.
Ra’iisul Wasaare Rooble oo Baarlamaanka u jeediyay khudbad kooban ka hor inta aan la ansixin ayaa sheegay illaa 8 qodob oo uu ka shaqeyn doono, isla markaana saldhig u noqon doono Xukuumadda uu soo dhisi doono.
waxaa ka mid ahaa qodobadaas:-
1- Arrimaha amniga,
3- Horumarinta dhaqaalaha iyo adeega buslahda
4- Cadaalada iyo garsoorka
5- dowlad wanaag iyo ladagaalanka musuq maasuqa
6- dib u eegista Dasuurka
7- dhab u heshiisiinta
8- iskaashiga caalamiga ah
Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa sheegay in Xukuumadda uu soo dhisi doono ay dalka ka gudbin doonto marxalad kala guurka, isla markaana ka shaqeyneyso hannaan doorasho xor iyo xalaal ah oo heshiis lagu yahay.
Ansixinta Ra’iisul Wasaaraha ayaa aheyd mid u dhacday qaab fudud oo aan ku adkeyn aheyn, taasoo ka dambeysay dadaalo uu sameeyay Ra’iisul Wasaare Rooble oo kulamo la qaatay Xildhibaannada beelaha, si codka kalsoonida loo siiyo.
Hase yeeshee waxaa shaqo badan laga rabaa marka uu soo dhiso Xukuumad cusub inuu codka kalsoonida ka helo Baarlamaanka, taasoo la filayo in aanay u fududaan doonin sida fudud ee lagu ansixiyay.
Previous articleAl-Shabaab ‘oo gacanta ku haya’ ergooyin soo xulaya xildhibaanada 2020/21
Next article‘How is your country doing?’: Trump jabs Ilhan Omar over criticisms of US